Inokuthula, Ikhaya laseCentral Riverside - I-Airbnb
Inokuthula, Ikhaya laseCentral Riverside
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Anne
U-Anne Ungumbungazi ovelele
Jabulela le B&B ebukekayo ehlala ngqo emfuleni ibangana nje ukusuka enkabeni yedolobha. U-Anne, umbungazi wakho, unesipiliyoni seminyaka eminingi sokwamukela izihambi futhi uzokwamukela ngemfudumalo. Uzosebenzisa indlu yakho yokugezela, kodwa sicela uqaphele ukuthi lena yindawo yokuhlala esingethwe. Ukudla kwasekuseni kufakiwe.
Kanye nokufinyelela ekamelweni lakho nendawo yokugezela, ikhishi, igumbi lokuhlala, kanye ne-patio yangemuva kuyatholakala ukuze ujabulele. Jabulela inkomishi noma ingilazi yewayini njengoba uhlezi futhi uphumule ngokubuka komfula okunokuthula okuvela egumbini lokuhlala kanye nevulandi.
4.96 · 289 okushiwo abanye